कोरोना भाइरसबाट विदेशमा १ सय २१ नेपालीको ज्यान गयो,हेर्नुहोस् कुन देशमा कति ? — KhabarTweet
कोरोना भाइरसबाट विदेशमा १ सय २१ नेपालीको ज्यान गयो,हेर्नुहोस् कुन देशमा कति ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७ समय: २१:३२:०७
काठमाण्डौ – विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म विदेशमा रहेका १ सय २१ जना नेपालीको ज्यान गएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा ६६ जना गैरआवासीय नेपालको ज्यान गएको छ । समितिका संयोजक डा। सञ्जीव सापकोटाका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा १९ जना नेपालीको ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको नेपालीको संख्या १७ पुगेको छ । यस्तै साउदी अरबमा ८ जना, बहराइनमा ३ जना, कुवेतमा २ जना, कतारमा १ जना, आयरल्याण्डमा १ जना, जापानमा १ जना, टर्कीमा १ जना, नेदरल्याण्डमा १ जना र स्वीडेनमा १ जनाको ज्यान गएको छ ।
संयोजक डा.सापकोटाका अनुसार विदेशमा १४ हजार ४ सय २५ जना गैरआवासीय नेपालीहरु कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
स्वास्थ्य समितिका अनुसार कतार, अमेरिका, यूएई, युके, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, मलेसिया, टर्की, डेनमार्क, पोर्चुगल, क्यानाडा, आयरल्याण्ड, माल्दिभ्स्, स्पेन, अष्ट्रेलिया, जापान, बेल्जिमय, स्वीड्रल्याण्ड, फिनल्याण्ड, जर्मनी, साईप्रस, न्यूजिल्याण्ड, हङकङ, भारत, माल्टा, पोल्याण्ड, रुस, फ्रान्स, म्यानमार, रोमानिया, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड लगायतका ३४ देशका नेपालीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
संक्रमितमध्ये ४ हजार ५ सय भन्दा बढी नेपालीहरु कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । यो हप्ता डेनमार्क र टर्कीमा नेपालीमा नयाँ संक्रमण देखिएको हो ।